UNITEK USB 3.0 3-Port Memory Card Reader ~ ICT.com.mm
HomeUNITEK USB 3.0 3-Port Memory Card Reader
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။Memory SD card အမျိုးမျိုးကို ကွန်ပြူတာနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် USB 3.0 Card Reader ဖြစ်သည်။ Data Transfer Speed 5GBps အထိရရှိနိုင်ပြီး USB 2.0/1.1 များနှင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ Adapter ထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ HD ဓာတ်ပုံများနှင့် Video Recordings များကို ကူးပြောင်းနိုင်မည့် Ideal card... [Learn more]
Brand: UNITEKSKU: 129097N/ASee more: Cables & Adapters, Digiware, Mobile Accessories, Products, Recent Updates, Shop, Under 100k, UNITEKFilter by: Adapters, DG,
Memory SD card အမျိုးမျိုးကို ကွန်ပြူတာနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် USB 3.0 Card Reader ဖြစ်သည်။ Data Transfer Speed 5GBps အထိရရှိနိုင်ပြီး USB 2.0/1.1 များနှင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ Adapter ထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ HD ဓာတ်ပုံများနှင့် Video Recordings များကို ကူးပြောင်းနိုင်မည့် Ideal card reader driver ပါဝင်သည်။ SDHC (UHS-I), SDXC (UHS-I), microSD, microSDHC (UHS-I), microSDXC (UHS-I) and CF typeⅠ(3.3mm)/MD စသည့် ကတ်အမျိုးအစား အားလုံးနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Windows XP/Vista/7/8/8.1(32/64-bit); Mac OS 10.10 or higher; Chrome OS; Linux OS စသည့် ကွန်ပြူတာစနစ်အားလုံးနှင့်လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
USB 3.0 Connection, Compatible: SD/Micro/CF, Number of Port:3Ports, Model: Y-9313
Multi function3slots USB 3.0 Card Reader sync at speeds up to 5Gbps, backward compatible with USB 2.0 / 1.1.
No adapter needed. No external power supply required , USB Bus powered. Draw Power directly from USB3.0 Port.
Ideal card reader driver for transferring high-resolution images and video recordings. Support SDHC (UHS-I), SDXC (UHS-I), microSD, microSDHC (UHS-I), microSDXC (UHS-I) and CF typeⅠ(3.3mm)/MD.
Compatible OS: Windows XP/Vista/7/8/8.1(32/64-bit); Mac OS 10.10 or higher; Chrome OS; Linux OS.
This item: UNITEK USB 3.0 3-Port Memory Card Reader K22,000